Lahatsoratra nataon'i George Fakorellis momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i George Fakorellis
George dia a Grateth Marketing Associate miasa ho an'ny rindrambaiko automatique email Moosend! Tiany ny manoratra momba ny Marketing amin'ny Era Digital sy ireo hacks amin'ny fitomboana izay hitany nandritra ny fikarohana nataony isan'andro. Liana foana izy hiresaka momba ny zavatra niainany sy ny hevitra ka aza misalasala mandefa hafatra ho azy hizara ny fahalalanao mahaliana.
Moosend: Marketing amin'ny mailaka & mandeha ho azy
Alahady 17 Febroary 2019 Alatsinainy 18 Febroary 2019 George Fakorellis
Moosend, ilay mari-pahaizana Email Marketing and Automation nomena loka, dia namaritra indray ny endrika marketing amin'ny mailaka, ny drafitra momba ny vidiny ary ny sandan'ny vola miaraka amin'ny tsy fitovizany, ny fanoloran-tenany ho amin'ny hatsarana ary ny fahombiazan'ny mpanjifa. Tao anatin'ny 8 taona monja dia nahavita nanangana fisian'izao tontolo izao niaraka tamin'ny maso ivoho avo lenta sy orinasa maro orinasa toa an'i Ted-X, ary ING, i Moosend, raha tsy hiteny afa-tsy vitsivitsy. Moosend no sehatra voalohany teo amin'ny sehatry ny indostria nahazo mari-pankasitrahana ISO sy mifanaraka amin'ny GDPR, ka manaporofo ny fombany